Surah 002-1 Al Baqara : The Cow Part (2) | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← Sale -alar Mohamod ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Sirah17-Lessons from Al isra & Al miraj. →
၀၀၂း၂၇၂။ (အို-နဗီတမန်တော်) ထို (ကာဖိရ်) တို့အားတရားလမ်းမှန်သို့ အရောက်ပို့ဆောင်ခြင်းသည် အသင်၏တာဝန်မဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိမိနှစ်လိုတော်မူသော သူတို့ကို တရားလမ်းမှန်သို့အရောက် ပို့ဆောင်တော်မူသည်။ ထို့ပြင် (အို-မွတ်စ်လင်မ် အပေါင်းတို့) အသင်တို့သည် (မိမိတို့၏)ဥစ္စာပစ္စည်းများအနက် မည်သည့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမဆို အလှူဒါနပြုကြကုန်အံ့၊ (ထိုအလှူဒါနများသည်)အသင်တို့၏ အကျိုးငှာသာ ဖြစ်ကုန်၏။ စင်စစ်သော်ကားအသင်တို့သည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နှစ်သက်ကျေနပ်မှုကိုဆည်းပူးရန်အလို့ငှါသာ လှူဒါန်းပေးကမ်းကြကုန်၏။ (သို့ဖြစ်ရာအသင်တို့သည် ‘မွတ်စ်လင်မ်’၊ ‘ကာဖိရ်’ မခြား သူဆင်းရဲတို့အား ပေးကမ်းလှူဒါန်း ကြရပေမည်)။ တဖန် အသင်တို့သည်(မိမိတို့၏) ဥစ္စာပစ္စည်းများအနက် မည်သည့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမဆို လှူဒါန်းကြကုန်အံ့၊ (ထိုအလှူဒါနများ၏ ကုသိုလ်အကျိုးများကို) အသင်တို့သည်အပြည့်အစုံ ခံစားကြရကုန်အံ့၊ထို့ပြင် အသင်တို့သည် (မိမိတို့၏ အလှူဒါနများနှင့် စပ်လျဉ်း၍) မတရားပြုခြင်းကို ခံကြရမည်မဟုတ်ပေ။
This entry was posted in Untags and taggedှQuran. Bookmark the permalink.